Sawirro:- Dowladda hoose iyo Soomaalida Ohio oo si dhaw u wada shaqeynaya – XOGMAAL.COM
Madaxda ayaa si gooniya ula shiray Dhalinyarada, waxayna is barasho kadib ku dhiirri geliyeen in ay yihiin mustaqbalkii Gobolka sidaa darteedna ay ka qeyb qaataan amniga, dhismaha iyo isdhexgalka, kana faa’iideystaan fursadaha jira oo qeyb ay ka tahay ka qaybgalka siyaasadda iyo Xafiisyada Dowladda oo ay imminka ka shaqeeyaan shaqsiyaad kooban.
By Soomaaliya	 On Dec 2, 2018
Kulan wada tashi ah oo ay yeesheen Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Maraykanka iyo Dowladda hoose ee Columbus Ohio ayaa lagu qabtay xarunta Isbitaalka Capital Park Family Healthcare Cente.
Kulankan oo uu Halku dhiggiisu ahaa ” Aan wada hadalno” Lat’s Talk, ayaa looga hadlay sidii loo abuuri lahaa is dhexgal iyo in Jaaliyadda Soomaaliyeed ay si dhab ah ula xariiri karaan hay’adaha dowlada, iyo in xal loo helo cabashooyinka Jaaliyadda oo ay ka mid tahay sidii loo dabageli lahaa sababta keenta dilalka dhalinyarada Soomaaliyeed iyo cidda ku lugta leh, in lala shaqeeyo dhalinyarada, arimaha waxbarashada,Guryaha, dhiirigalinta ganacsiga, la dagaalanka daroogada iyo qodobbo kale.
Xubnaha la kulmay Soomaalida oo ah xubnihii ku soo baxay doorashadii u danbaysay waxa ay ka jawaabayeen sidii ay Soomaalidu codkooda u siiyeen iyo in ay yihiin Dad hal abuur iyagoo koror dhaqaale oo muuqda ku leh Gobolka.
Waxaa kulankan qeyb ka ahaa, wada hadallo iyo su’aalo gooni gooni ah oo la weydiinayay masuuliyiintii ka socday Dowlada, waxanay xubnihii u hadlay Jaaliyadda Soomaaliyeed bogaadiyeen kulankan, iyagoo sheegay in Soomaalida Ohio dagta aysan ahayn kuwo cayr qaata balse ay yihiin kuwo bixiya canshuur aad u sarreysa.
Hay’ado, Ururro, iyo ganacsato ayaa fursad u helay in ay madaxda kala hadlaan caqabadaha ku gadaaman howlahooda, iyaga oo helay balanqaadyo kala duwan.
Mas’uuliyiinta ka socda Dowladda hoose iyo midda Gobolkaba waxa ay u badnaayeen Dhalinyaro ku soo baxay doorashooyinkii u danbeeyay iyaga oo xilligii ay tartamayeen, codkooda weydiistay Soomaalida degan gobolka, Ohio,islmarkaana doorashada ku guuleystay.
Kulankan oo xiiso gooniya u lahaa Soomaalida iyo Dowladda hoose waxa uu abuurayaa wada shaqeyn dhow oo ay Labada dhinac yeeshaan.
Ganacsade lagu dilay Degaanka Ceelasha Biyaha